'' Dhimashada xilliga qaboobaha waxay ka digaysaa bulshada cilmiga leh. Saadaasha Shabakadda
"Dhimashada xilliga qaboobaha" waxay ku baraarujineysaa bulshada cilmiga leh
Maxaa dhacaya xilliga qaboobaha? Runtu waxay tahay inay umuuqato inay ka sii kululaanayaan adduunka, laakiin xaaladdu way ka sii dari kartaa sida uu sheegayo Paul Beckwith, oo ah khabiir cilmiga cimilada ee Jaamacadda Ottawa ee Kanada. Waana inay soo bandhigtay xog cusub oo lagu muujiyay in isbeddelada ku yimaadda durdurrada diyaaradaha ee Waqooyiga Hemisphere waxay sababi kartaa dhibaatooyin daran xagga soo-saarka cuntada adduunka.
Marka, waxaan ku dhamaan karnaa ka hadalka »dhimashada jiilaalka», Laakiin maahan kaliya xilligan, laakiin sidoo kale guga, xagaaga iyo deyrta.
Fiidiyowga uu khabiirku ku daabacay kanaalkiisa YouTube-ka, waxaa lagu muujiyay sida ay hawooyinka woqooyiga Hemisphere, oo ah kuwo qoyan oo diirran, ay uga gudbayaan dhul-badeedka, sidaa darteed ay ku biirayaan cirka Koonfurta Hemisphere, kuwaasoo ah qabow iyo qalalan. Tani waa dhibaato aad u daran oo khabiirku uusan ka waaban inuu nagu soo dhoweeyo Qalalaasaha Cimilada, laakiin sidoo kale wuxuu faallooyin ka bixinayaa fiidiyowgiisa oo leh »waa inaan ku dhawaaqno xaalad deg deg ah oo cimilada adduunka ah".
Dhinaca kale, cilmiga bey'adda Robert Scribbler ayuu sheegtay in khalkhalka cimilada ay sabab u tahay isbeddelka cimilada ee dadku sameeyo. Xilliyadaha sanadka sidaan ognahay waa la waayi karaa haddii xaaladda hadda jirta aysan isbeddelin, oo iyaga lala jiro, sidoo kale xilliga qaboobaha marka kuleylka uu daboolo aagga ay tahay inuu yeesho cimilada caadiga ah ee xilliga qaboobaha.
Miyaan ku dambayn doonnaa jiilaalka Isbaanishka gacmo gaagaaban? Waxay u ekaan kartaa xoogaa la yaab leh, ugu yaraan xilligan, laakiin runtu waxay tahay inay jiraan kuwa sidaas u malaynaya marka la gaaro 2100 heerkulka celceliska adduunka wuxuu sare u kici karaa 3 darajo, in Spain laga yaabo inay xoogaa ku sii kordhiso qodobbada qaarkood.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxa ugu fiican ayaa ah had iyo jeer in laga hortago, miyaadan u maleyneynin?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » "Dhimashada xilliga qaboobaha" waxay ku baraarujineysaa bulshada cilmiga leh
Maxaa ku dhacaya badda Mediterranean?